Development athzọ - Eurborn Co., Ltd.
Na 2019, na-ewepụ ụmụ mmadụ na ọdịbendị, anyị malitere inye atụmatụ ndị njem anyị na-eme kwa afọ kwa afọ.
Na 2018, anyị mụbara ọnụ ọgụgụ nke ngalaba ahịa ma wega ya na CBD nke etiti obodo Dongguan.
Na 2017, a ga-agbakwunye corridor igwe ịsa ahụ. Ọ nwere ike ịgbaso ngwa ngwa uwe, ntutu, irighiri ntutu, nke nwere ike belata nsogbu mmetọ nke ndị mmadụ na-abanye ma na-ahapụ ebe dị ọcha.
Na 2016, ihe ndozi anyi nile zuru oke na ngwugwu CREE LED. Iji nweta ihe kacha mma mma na kachasị Ikanam arụmọrụ, rụchaa dum SMD usoro na-ụlọ.
Na 2015, anyị tinyere 5 CNC akụrụngwa si Japan na 6 Sodick nkenke ebua igwe si Japan.
Na 2013, iji mee ka nchịkọta data zie ezi ma rute oke nchekwa nchekwa, anyị kwalitere usoro niile nke akụrụngwa na akara "EVERYFINE", nke kwụsiri ike ma nwee ntụkwasị obi na arụ ọrụ ma nwee ikike mgbochi nnyonye anya siri ike.
Na 2012, iji nyekwuo nlezianya dị mma, nke dabara adaba, ngwa ngwa na nke ziri ezi, anyị dochiri onye nyocha ọhụụ dị iche iche wee jiri nyocha ọhụụ dị iche iche "EVERYFINE".
Na 2011, iji zute ọkọlọtọ nyocha ụlọ ọrụ mba ụwa, anyị bidoro mezie usoro mmepụta ma na-eduzi ọzụzụ maka ọkụ ọkụ maka onye ọrụ.
NA 2010, anyị mba ahịa otu malitere isonye na International Lighting Show.
Na 2008, a gbakwụnyere mmepụta nke ngalaba ebu.
Eurborn Co., Ltd ka edebanyere aha ya na 2006.
Akụkọ Companylọ ọrụ ：